Ahoana ny fiasan'ny sosona amin'ny Photoshop | Famoronana an-tserasera
Ny fahalalana ny fomba fikirakirana ireo sosona dia tena ilaina mba hanombohana miasa ao amin'ny Adobe Photoshop, tsy hoe satria hanampy anao ho voarindra bebe kokoa ianao, fa satria hahafahanao hivoaka bebe kokoa amin'ity fitaovana famolavolana ity. Amin'ity lesona ity dia manazava izahay fa ny fomba fiasan'ny sosona amin'ny adobe photoshop, tsikelikely ary tsy misy fahasarotana. Raha manomboka mampiasa ilay programa ianao, dia tsy azonao hadino ity lahatsoratra ity!
1 Inona avy ireo sosona ao amin'ny Adobe Photoshop?
2 Ahoana ny fiasan'ny sosona ao amin'ny Adobe Photoshop?
2.1 Afeno, foronina, averina, ary hamafana sosona ao amin'ny Photoshop
2.2 Filaharana sy ny fomba famoronana vondrona sosona ao amin'ny Photoshop
2.3 Mifindra ary ovao ny atin'ny sosona
2.4 Atambaro ny sosona
Inona avy ireo sosona ao amin'ny Adobe Photoshop?
Ireo sosona izy ireo dia toy ny pejy mangarahara izay mifangaroharo ary ahafahanao manampy atiny. Ny volondavenona fotsy sy fotsy dia mampiseho fa mangarahara ity faritra ity. Rehefa mamela ireo faritra tsy misy atiny ianao dia hita ny sosona ao ambany.
Ireo sosona hita eo amin'ny tontonana "sosona" izay matetika hita eo amin'ny ilany ankavanan'ny efijery. Raha tsy hitanao eo izy dia azonao atao foana ny mampandeha azy io ao amin'ny kiheba «Window» (eo amin'ny menio ambony), amin'ny fipihana ny «sosona».
Ahoana ny fiasan'ny sosona ao amin'ny Adobe Photoshop?
Rehefa tsindrio ny sosona iray ao amin'ny tontonana, dia miasa eo amboniny isika. Izay rehetra ataontsika ao anaty antontan-taratasy dia ampiharina amin'io sosona io fa tsy amin'ny hafa. Noho izany tena ilaina tokoa ny maka antoka fa miasa amin'ny sosona marina isika.
Afeno, foronina, averina, ary hamafana sosona ao amin'ny Photoshop
Mba hanafenana sosona iray dia tsindrio ny kisary maso izay miseho amin'ny ankavianao. Raha eo am-pikitihana ny maso dia tazominao safidy fanaovan-gazety (Mac) na alt (Windows) amin'ny kitendry solosainao, hanafina ny sosona rehetra ambanin'izany.
Azonao atao mamorona sosona vaovao amin'ny alàlan'ny fanindriana ny marika plus misy amin'ny zoro ambany havia amin'ny tontonana sosona. Raha tianao azonao atao ny manao dika mitovy sosona efa misy, mila mametraka ny tenanao eo fotsiny ianao, tazomy ny bokotra ankavanan'ny solosaina ary ao amin'ny menio mitete izay hanokatra ny tsindry eo amin'ny «layer duplicate». Raha hamafa ny sosona dia tsindrio ilay fitoeran'ny fako eo amin'ny farany ambanin'ny tontonana. Azonao atao koa ny manao azy amin'ny alàlan'ny fanindriana ny backspace na mamafa ny lakile.
Filaharana sy ny fomba famoronana vondrona sosona ao amin'ny Photoshop
Ny filaharan'ny sosona dia azo ovainaRaha ny tena izy, amin'ity fomba ity dia misafidy ny fomba ahatontosana ny atiny isika. Ny famindrana azy ireo dia tena tsotra, mila fotsiny ianao tazomy amin'ny tontonana izy ary sintomy amin'ny toerana tianao hametrahana azy. Inona koa, afaka mamorona vondrona sosona ianao misafidy ny sosona rehetra tianao atambatra ary manindry ny kitendry solosainao baiko + G (Mac) na fifehezana + G (Windows). Ny vondrona dia hamela anao hampiditra effets, textures ary blending mode amin'ny sosona rehetra ao amin'ilay vondrona iray ihany, ka hahatonga ireo effets ireo hihetsika amin'izy rehetra, toy ny hoe tafapetraka, tsy misy fiatraikany amin'ny hafa.
Mifindra ary ovao ny atin'ny sosona
Con ny fitaovana "mihetsika", azo alaina ao amin'ny tontonana fitaovana, azonao atao ny mamindra ny atin'ny sosona iray nefa tsy manova ny ambiny. Raha tianao hanova izany atiny izany, tsindrio ny kitendry solosainao baiko + T (Mac) na fifehezana + T (Windows). Tadidio fa raha hanova ny habeny ianao dia tsy maintsy manao izany tazomy ny bokotra safidy (Mac) na alt (Windows) hisorohana azy tsy ho simba.
Atambaro ny sosona
Azonao atao manambatra sosona samihafa hamoronana tokana. Safidio ny sosona tianao atambatra ary tano mafy ny bokotra totozy havanana. Ao amin'ny menio milatsaka dia hanome safidy roa "mitambatra sosona" na ny sosona hita maso fotsiny. Raha misafidy maromaro ianao dia misafidy iray fotsiny dia hanome anao ny safidy "mirongatra" (hampifanaraka ny sosona etsy ambany fotsiny).
Ahoana ny fahitanao ny fiasa amin'ny sosona dia tena tsotra ary manamora ny asa rehetra, tokony ho azonao fotsiny ny fomba fiasan'izy ireo ary manomboka mampiasa azy ireo. Raha vaovao amin'ny fitaovana ianao, Manoro hevitra anao izahay mba hanararaotra ny fampianarana anay ho an'ny vao manomboka, ao amin'izy ireo ianao dia hianatra hampiasa ireo fiasa fototra indrindra amin'ny programa, ohatra ny fomba fampiharana ny sivana marani-tsaina ao amin'ny Photoshop.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » Fitaovana famolavolana » Photoshop » Ahoana ny fiasan'ny sosona amin'ny Photoshop